4 Tetikasam-pahaizana momba ny varotra persana ho fampiroboroboana ny fahombiazanao - Fiahiahiana momba ny fanandramana ara-tsosialy
Ny dokam-barotra Digital dia miteraka adiresy mailaka, SEO, dokambarotra an-tserasera, media sosialyary famoronana tranokala. Manolotra fanamby ho an'ireo tompona orinasa eo an-toerana izay te-hanintona kokoa ny eyeball ao amin'ny tranokalany. Amin'ny ankapobeny, ireoIreo mpandraharaha dia be zotom-po amin'ny fikarohana ny fomba fitantanana tsara indrindra amin'ny orinasa.
Mikasika izany, Nik Chaykovskiy, lehiben'ny Success Manager Manager Success Semalt ,dia mamelabelatra ireo tetikady ara-barotra maimaim-poana izay mety hapetrahan'ny orinasa amin'ny 2017. Ny tompona orinasa toy ny mpisolovava, toeram-pitsaboana,Ireo dokotera, ary ireo mpizahatany dia hahita fa tena ilaina ny paikady.
1 - cool new gadgets for men. Tadidio, ny tranonkalanao dia "mustang" convertible.
Ny lafiny rehetra amin'ny marketing dizitaly dia tsy maintsy mitondra fiara SEO amin'ny Internettranonkala fandraharahana. Tsy maintsy heverina ho zava-dehibe tokoa izany. Vohikala maro no nohariana tamin'ny famolavolan-kevitra tsy resy lahatra izay midika fa izy ireosarotra ny mivezivezy amin'ny fitaovana toy ny finday ary mijery hafahafa. Ny fikarohana dia mampiseho fa maherin'ny 43% ny fifamoivoizana mpanjifa avy amin'ny findayireo fitaovana miaraka amin'ilay endrika nomanina hitombo. Noho izany, toeram-pandraharahana ny tranokala iray dia tsy maintsy manintona amin'ny fikarohana mora amin'ny fitaovana finday. Visitorsdia tokony ho afaka manindry ny adiresy imailaka na ny nomeraon-telefaoniny raha te hifandray amin'ny tompona orinasa orinasa. Ankoatra izany, raha manana mpanjifahanoratra ny fifandraisana, dia misy orinasa iray mety hamoy azy ireo amin'ny mpifaninana miaraka amin'ireo tranonkala izay alefan'ny finday. Ny hevitra, noho izany,dia ny famerenana ny mpitsidika ho mpihinana mailaka, antso an-telefaona na mandeha an-tongotra.
2. Manaova "valiny manankarena" ao amin'ny tranonkala.
Manova ny fomba ampiasain'i Google ny olona ankehitrinymitadiava fampahalalana nefa alefaso Google hamaly ny fangatahan'izy ireo. Amin'ny maha orinasa iray azy, Google dia nametraka izany fahafahana izany tamin'ny fampidirana"valiny manankarena" amin'ny algorithm amin'ny alàlan'ny fikarohana ary manatsara ny traikefa SEO. Izany dia manome valiny marina kokoa. Amin'izany, any amin'ny orinasa any an-toeranaNy tompony dia manana fanontaniana mahazatra izay ambarany matetika amin'ny mpanjifa. Noho izany, dia tena mahavariana ny mametraka valim-panontaniana feno ao amin'ny tranonkalan'ny orinasa irayizay toa miseho voalohany rehefa mametraka fanontaniana i Google.
3. Ampiasao amim-pahamalinana ny media sosialy.
Toa ny ankamaroan'ny fandraharahana eo an-toerana no mijanona rehefa manapa-kevitra amin'ny sehatra sosialyny fampiasana sy ny fomba tokony handefasana hafatra. Ny fitsipika manan-danja dia ny mahatakatra ny fototra iorenan'ny mpanjifa. Ny media sosialy dia tsy foto-kevitra vaovao. To tuneny mpanjifanao, manomboka amin'ny manam-pahaizana hafa momba ny media sosialy. Ankoatra izay, ny famoahana amin'ny haino aman-jery sosialy dia mamorona feo fotsiny ho an'ny orinasaAnkoatra ny mifandray amin'ny mpanjifa mahatoky. Noho izany, ny mpandraharaha iray dia tokony hitandrina mba tsy hivezivezy amin'ny vohikala sy ny soso-kevitra.
4. Mijanona mifantoka amin'ny mailaka marketing.
Taona vitsivitsy lasa izay, nivarotra mailaka ny mpivarotra mailaka mba hanohanana ny lalana ho an'ny fiarahamoninamedia marketing. Na izany aza, ho an'ny ankamaroan'ny fandraharahana any an-toerana, ny mailaka mailaka dia fitaovana mora ampiasaina amin'ny mpanjifa. Instagramary Facebook dia mampiseho lahatsoratra kely fotsiny amin'ny mpanjohy. Mitaky vola amin'ny olona maro izy ireo. Ny mpandraharaha dia afaka mandefa singa vaovao,fampahalalana ny zava-miseho ary manokana tsy ampiasaina amin'ny alàlan'ny mailaka. Ny fampiasana ny MailChimp dia ahafahan'ny tompona orinasa mandefa hafatra amin'ny kaontinanta 2,000 izaysehatra ara-barotra mahomby.
Ho famaranana dia tokony hijery ny raharaham-barotra foana ireo tompon'ny orinasa eo an-toeranaIreo tranonkala ahafahana maka antoka fa ny fifandraisana dia miasa. Ny tetikady ara-barotra nomerika hafa dia azo ampiharina amin'ny fitaterana ny fifamoivoizanatoerana.